Yangu iPhone Haizotamba YouTube Mavhidhiyo. Heino Nei & Iyo Kugadzirisa! - Iphone
kuisa sei nhamba yekuwedzera
kuchaja hakutsigirwi neiyi ipad yechishongedzo
chii chinonzi pulse mubhaibheri
Yangu iPhone Haizotamba YouTube Mavhidhiyo! Heino Chikonzero & Iyo Gadzirisa.
Wanga uchizotarisa vhidhiyo yeYouTube pane yako iPhone, asi haigone kutakura. Zvinoshungurudza zvisingaite kana YouTube isiri kushanda pa iPhone yako, kunyanya kana iwe uchiedza kuratidza vhidhiyo inosetsa kushamwari yako kana kuteerera vhidhiyo yemumhanzi kunzvimbo yekurovedza muviri. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone isingatambe YouTube mavhidhiyo uye tsanangura magadzirisiro edambudziko zvachose.
YouTube Haisi Kushanda Pane yangu iPhone: Heino Kugadzirisa!
Edza Kudzorerazve Yako iPhone
Usati waenda kumberi, edza kudzima yako iPhone kure uye kudzoka zvakare. Kudzorerazve yako iPhone inoipa kutanga kutsva uye ine mukana wekugadzirisa madiki masoftware nyaya, izvo zvinogona kuve chikonzero nei yako iPhone isingatambe YouTube mavhidhiyo.
Kudzima yako iPhone, tinya uye bata bhatani remagetsi (iro rinozivikanwawo se Kurara / Kumuka bhatani). Iro redhiyo icon icon uye 'Slide kumagetsi kudzima' ichaonekwa pane kuratidzwa kweiyo iPhone yako. Rova zvakasimba red simba Icon kubva kuruboshwe kurudyi kudzima yako iPhone. Mira kwehafu yeminiti usati wadzosera yako iPhone kumashure, kungoita chokwadi kuti ine mukana wekuvhara zvachose.
Troubleshoot YouTube Mapurogiramu
Kana iwe ukadzorerazve iPhone yako asi YouTube ichiri kusashanda, danho rinotevera nderekugadzirisa dambudziko rinogona kunge richikonzerwa neapp yauri kushandisa kuona YouTube. Kune akawanda emahara uye akabhadharwa maapplication aunogona kushandisa kutarisa YouTube mavhidhiyo pane yako iPhone, hapana ayo ari akakwana. Kana chimwe chinhu chikatadza, iwe haugone kutarisa ako aunofarira YouTube mavhidhiyo.
Kuti uone kana yako YouTube app iri kukonzera dambudziko, isu tichatanga nekuvhara uye kuivhura zvakare. Izvi zvinopa iyo Anwendung 'ita-pamusoro' kuitira kana chimwe chinhu chakatadza kana ichivhurwa kekutanga.
Kuti uvhare yako YouTube app, tanga na kudzvanya kaviri bhatani repamba. Izvi zvichavhura iyo App Switcher, iyo inobvumidza iwe kuona ese maapps izvozvi akavhurwa pane yako iPhone. Rova zvakasimba wako YouTube Anwendung kubva chidzitiro kuti uvhare.
Kana yako iPhone isina bhatani repamba, usazvidya moyo! Iwe uchiri kugona kuwana iyo switch switch. Ingo vhura iyo YouTube app (kana chero chimwe chirongwa). Kana yangovhurwa, Rova zvakasimba kumusoro kubva pasi chidzitiro uye imi mese makagadzirira! Iwe unofanirwa kukwanisa kuchinja uye kuvhara maapplication ako nenzira imwecheteyo iwe yaungaita pane yekare iPhone.
sei usinganzwisise vatauri ve iphone vanoshanda
Tarisa Zvekuvandudzwa: Pane Chinovandudzwa Chinowanikwa Kune Iyo YouTube App?
Kana YouTube isiri kushanda mushure mekuvhara iyo app, tarisa kuti uve nechokwadi chekuti wagadzirisa yako YouTube app kune yayo yazvino vhezheni. Vagadziri vanogadziridza avo maapplication nguva dzese dzekuwedzera nyowani maficha uye kurongedza kumusoro software bugs.
Kuti uone kana paine update inowanikwa yeYouTube app, vhura iyo App Store. Tevere, tinya iyo Akaundi icon , uye pfugama pasi kune iyo Zvidzoreso chikamu. Kana iyo yekuvandudza iripo, tinya bhuruu Kwidziridza bhatani padhuze neapp.
Uninstall Uye Reinstall Yako YouTube App
Kana paine chakaomesesa software nyaya neyako yaunofarira YouTube app, ungangoda kudzima uye kudzoreredza iyo app. Paunobvisa iyo app, ese software uye marongero kubva kuapp iyoyo achadzimwa kubva ku iPhone yako. Kana iyo app yadzoreredzwa, zvichaita sekunge kuti iwe wakadhirodha iyo kekutanga.
iTunes isingazive iphone 5s
Usanetseka - yako account yeYouTube haizobviswa kana iwe uchibvisa iyo app. Kana iwe uri kushandisa yakabhadharwa YouTube app senge ProTube, iwe unozokwanisa kuisazve iyo yemahara chero bedzi iwe wakapinda muiyo imwechete ID ID yawakashandisa pawakatenga iyo app pakutanga.
Kuti uninstall iyo app, tanga nekudzvanya zvishoma uye nekubata icon yeYouTube app. Ramba uchimanikidza kusvikira diki menyu inokwira yakanamatira kuapp icon. Kubva ipapo, pombi Delete App , wozosimbisa chiito nekutepa Delete .
Kuti udzorezve iyo app, enda kuApp Store. Tinya iyo Yekutsvaga tebhu pazasi peyako iPhone kuratidza uye nyora muzita reunofarira YouTube app. Tinya Tora , ipapo Isa pedyo neyako yaunofarira YouTube app kuisazve pane yako iPhone.
Kana iwe ukadzosera iyo app uye YouTube ichiri kusashanda, ramba uchiverenga kune mamwe matipi!
Troubleshoot Wi-Fi Nyaya Dzinokonzera YouTube Kwete Kutakura
Vanhu vazhinji vanoshandisa Wi-Fi kutarisa YouTube mavhidhiyo pane yavo iPhone, uye hazvishamise kuti nyaya dzekubatanidza dzive chikonzero nei YouTube mavhidhiyo asingatambe pane yako iPhone. Kana dambudziko iri riri kukonzerwa ne iPhone yako kubatana neWi-Fi, tinoda kuona kana iri software kana Hardware nyaya.
Ngatikurumidze kugadzirisa Hardware: diki kanyanga ndiyo chikamu chehardware che iPhone yako iyo inokonzeresa kubatana neWi-Fi. Iyi kanyanga inobatsirawo yako iPhone kubatana nemidziyo yeBluetooth, saka kana yako iPhone yanga ichisangana nenyaya dzeWi-Fi neBluetooth panguva imwe chete, panogona kunge paine dambudziko neiyo kanyanga. Nekudaro, isu hatigone kuve nechokwadi kana paine chinetso chehardware, saka tevera software yekugadzirisa matanho pazasi!
Dzorera Wi-Fi Kubva Uye Kudzoka Pairi
Kutanga, isu tichaedza kudzima Wi-Fi kudzima uye kumashure. Kufanana nekudzima yako iPhone kure uye kumashure, kudzima Wi-Fi kudzoka uye kumashure kunogona kugadzirisa diki software bug iyo inogona kunge ichikonzera yakaipa Wi-Fi kubatana.
Kuti ubvise Wi-Fi uye udzokere, vhura iyo Zvirongwa app uye tinya Wi-Fi. Tevere, tinya switch padivi peWi-Fi kudzima Wi-Fi. Iwe uchaziva kuti Wi-Fi yakadzimwa kana switch iri grey. Mira masekonzi mashoma usati wabaya switch zvakare kuti udzorere Wi-Fi.
nei foni yangu ichichimbidza kunonoka
Kana yako iPhone isingatambe mavhidhiyo eYouTube, edza kubatanidza kune imwe netiweki yeWi-Fi kana uchikwanisa. Kana YouTube isiri kushanda imwe netiweki yeWi-Fi asi ichiita playf pane imwe, ipapo panogona kunge paine dambudziko nekusashanda zvakanaka kweWi-Fi network, kwete yako iPhone. Tarisa uone chinyorwa chedu pane zvekuita kana yako iPhone isinga batane neWi-Fi kune mamwe matipi!
Tarisa YouTube Server Status
Usati waenda kune yekupedzisira matambudziko, tora nekukurumidza tarisa pane chinzvimbo chemaseva eYouTube. Dzimwe nguva, maseva avo anopunzika kana kuve achigadziriswa, izvo zvinogona kukutadzisa kuona mavhidhiyo. Tarisa iyo chimiro chemaseva eYouTube uye ona kana ivo vari kumusoro uye vachimhanya. Kana vazhinji vevamwe vanhu vari kuzivisa matambudziko, saka maseva acho anogona kunge ari pasi!
Paunogadzirisazve maratidziro enetiweki, ese maWi-Fi, Makaralı, uye VPN (Virtual Private Network) maratidziro achadzimwa uye kumiswazve. Zvinogona kuva zvakaoma kuronda pasi chaicho chinokonzeresa dambudziko re software, saka pane kuironda pasi, ticha bvisa uye todzoreredza ese ako marongero eApple network.
Rangarira: Usati waseta patsva netiweki yako yeApple, ita shuwa kuti unonyora pasi ese ako eWi-Fi mapassword! Uchava iwe reenter navo kamwe Reset kwapera.
Kuti ugadzirise zvakare maratidziro enetiweki, tanga nekuvhura iyo Settings app. Pombi General -> Reset -> Reset Network Kurongwa. Iwe unozokurudzirwa kuisa yako passcode, wobva wasimbisa kuti iwe unoda kuseta yako iPhone's network seti. Your iPhone achava reboot kamwe Reset zvakakwana.
YouTube Iri Kushanda Pane Yako iPhone!
YouTube iri kushanda pane yako iPhone uye unokwanisa kuona ako aunofarira mavhidhiyo zvakare. Ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media kuti shamwari dzako nemhuri vazive zvekuita kana yavo iPhone isingatambe YouTube mavhidhiyo. Ndatenda nekuverenga ichi chinyorwa, uye siya mhinduro pasi apa kana uchida kutibvunza chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone!